राजधानीमा “बशन्त कविता ग्रुप”को साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न
ईन्द्र जिजीबिषा-काठमाडौ २६ चैत्र,”बशन्त कविता” ग्रुपले राजधानीमा साहित्यिक कार्यक्रम गरेको छ । दक्षिण कोरिया बाट नेपाल आएका साहित्य र कला क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुले काठमाडौको लाजिम्पाटस्थित डिल्ली रमण पुस्ताकालयमा सृजना सुन्ने र सुनाउने कार्यक्रम गरेको हो । “बशन्त कविता” दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरुले सुरुवात गरेको फेसबुक ग्रुप हो । साहित्य र कलाको नत निश्चित कुनै भूगोल हुन्छ नत कुनै सिमाना नै ? यसैले रोजगारीको लागि दक्षिण कोरियामा रहेर पनि नेपाली साहित्य र कलाको लागि अनवरत लागि रहेका छन् बशन्त ग्रुपका अभियानकर्ताहरू ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्राध्यापक एवं बरिष्ठ गीतकार कृष्णहरी बरालले “साहित्य सिकाएर सिकिने चिज हो । कतै मूल फुटेर पानि आफै बाहिर निस्किन्छ तर आफै मूल फुटेर निस्केन भने ईनार खनेर पनि पानि निकाल्न सकिन्छ । साहित्य पनि त्यस्तै नै हो । तर साहित्यमा भन्न खोजेको कुरा सिधै भन्नु भन्दा घुमाउरो पाराले भनेको कुरा चाखलाग्दो हुन्छ । तपाइको घर कहाँ हो ? भनेर कसैले सोध्यो भने, ‘लहरा पहारा छहराले भरिएको देश छ जहाँ, तपाईको अनुस्पस्थितिमा चराहरुले विरहको गीत गाउछन् त्यहाँ’ यसरि साहित्यिक भावमा भन्यो भने साहित्यिक भाव बन्छ । देशको प्रधानमन्त्री निश्चित समयको लागि जनताले मनपराउलान्, सबैको हाई-हाई बन्लान् तर कला र साहित्य कहिल्यै मर्दैन, यो सधै मन पराइन्छ, अनन्त बाँची रहन्छ । गजलको बारेमा अहिले बाझा बाझ चलिरहेको छ, कसैले बहारमा भन्ने कसैले के भन्ने ? तर गजल लेख्दा पाँच शेरको गजल छ भने पाँच वटा काव्यको बर्णन हुनु पर्छ गजलमा ” भने ।
सभापतिको आसन बाट बोल्दै उपन्यासकार प्रगती राईले,दक्षिण कोरियामा केहि साथीहरुको सहयोगमा आफुले नेपाली साहित्यको ब्याड राखेको स्मरण गर्दै आज दक्षिण कोरियामा नेपाली साहित्य हराभरा भएकोमा आफु खुसि रहेको बताईन् । बशन्त कविता ग्रुपमा कविता मात्रै वाचन नभएर गजल,मुक्तक पनि वाचन भएकोले बशन्त कविता ग्रुपलाई बशन्त साहित्यिक ग्रुप बनाउन पनि सुझाईन् ।
कार्यक्रममा राजन प्रभातले गजल,शुरेन्द्र कार्कीले कविता,जितेन्द्र बानियाँले कविता र गजल,रुद्र अधिकारीले मुक्तक,ऋतु प्रेयसीले गजल,नारायणराज चौलागाईले गजल,तपेन्द्र विष्टले गजल,खगेन्द्र पराजुलीले कविता,दिपक रावलले कविता र मुक्तक,एलिसा एकलासले गजल,नविन अनुपम रावल,सुनिल अधिकारीले मुक्तक,अभिषेक राजभाटले कविता,सुरेन्द्र महर्जन “आभा”ले कविता,मदन भण्डारीले मुक्तक,रचना बचुले गजल,आवास थापा,सन्तोष अम्गाईले मुक्तक,लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेले दुई गजल,उदाश कार्कीले मुक्तक,बिनोद बान्तावाले गजल,सन्दिप संग्रौला “दीलदुखी” र एलिसा एकलासले मुक्तक दोहरी, हरि लुईटेलले गजल,पृथक प्रकृतिले गजल,डाक्टर रेणु थापाले गजल,प्रगती राईले कविता र युवराज बस्नेत “बन्दीले आ-आफ्नो साहित्यिक सृजना वाचन गरेका थिए ।
उपन्यासकार प्रगती राईको सभाअध्यक्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बरिष्ठ गीतकार डाक्टर कृष्णहरी बराल प्रमुख अतिथि रहेका थिए । अन्य अतिथिहरुमा रेणु थापा,कुशल श्रेष्ठ,सुरेन्द्र महर्जन,रमेश पौडेल लगायत रहेका थिए ।
कतार पुगेर नवल खड्काले उद्घोष गरे भारतीय सिमानामा काँडेतारा लगाउने
ट्रकको ठक्कर बाट एकजना बालकको मृत्यु